Home Wararka Was. Shaqada ee NN oo Cusbooneysiisay Sharci Muhiim u ah Xoogsatada Somaliyeed.
Was. Shaqada ee NN oo Cusbooneysiisay Sharci Muhiim u ah Xoogsatada Somaliyeed.
Sharcigaan oo runtii ahaa mid ay dad badani kaga badbaadeen dhibaatooyin loogu geysan jiray waddamada Khaliijka ayaa waxaa sameysay dowladdii Xasan Sh Maxamuud, kaas oo in muddo ah si sax ah uga hsaqeynayey waddamada Khaliijka. Sharcigan shaqaalaha Sonaiyeed ee khaliijka ka xoogsada siinayey sharciyad la mid ah kuwa ay hasataa shaqaalaha laga keeno Filipiin, Bangaladhesh iyo Pakistan.
Laakiin dowladda NN iyadoo rabta inay ku xumeyso, kuna inkirto wannaaggii dowladdii ka horreysay ayey waxay CBB u isticmaashay in gabdho lagu dhoofiyey, kuwaas oo khaliijka la geeyey. Waa sax gabdho iyo wiilal darawal ah ayaa lagu dhoofiyey kuwaas oo maanta si sharci ah uga shaqeysta waddamada khaliijka.
Xiriirro dhowr ah oo aan la sameynay xaasan ay raggooda sharcigaan ka faa’iideen iyo haween ay reerahooda ka noolaadeen waxay noo sheegeen inay ka baxeen cabsidii ahayd:
In reeraha ama shirkadaha loo shaqeeyaa ay kugu gabood fali karaan sidey doonaan.
2.In inta jidka lagaa qabto lagu soo tarxiilo adigoo saaka gurigaaga ka soo baxay.
3.In mushaarkaaga laguu diido ama lagaa daahiyo, kadibna lagu tarxiilo marka uu noqo lacag badan.
4.In fasaxyo aad leedahay oo aad dalkaaga tagi kartid soona noqon kartid si sharci ah, adigoon wax cabsi ah qabin.
5.In shaqooyinka aad isku badbadalan karto oo aad mid ka tagi karto si sharci ah.
Dhinaca kale reero badan oo aan Yurub ama Ameerika loo jirin ayaa maanta waxay u nool yihiin si fiican. Waxay caruurtooda u dirsadaan iskullo, waxay iibsandaan hanti, waxay daaweystaan waayeelkooda iyo caruurtooda.
Haddaba maanta oo ay dowladdani maalmo ka hareen ayey waxay ballaarisay sharciga oo ay ku soo kordhisay qodobo, waayo shuruucda dad sameega ah waxay mar waliba u baahan yihiin in la cusbooneysiiyo oo laga saxo waxa ku soo kordha.
Mid ka mid shaqaalaha Safaaradda Somaliya ee noo jooga Sucuudiga ayaa noo xaqiijiyey in sharcigan oo ay sameysay dowladdii Xasan Sheekh , dowladdaanna ay hadda uun cusbooneysiisay uu wax weyn ka badalay dhibaato weyn oo ay qabeen xoogasatada Somaliya ka timaada oo hadda safaaradda ayaa u doodi karta xaqooda.
Marka waa loo baahnaa sharcigaan in mar hore la cusbooneysiiyo oo siyaasadeynta laga saaro.
MOL ma oga sababta ay u ogolaatay dowladdaan NN sharci ay inkireysay muddo 5 sano ah. Waxaasa laga yaabaa inay tahay qorsho ay rabto NN inay dacaayad doorasho u isticmaasho.
Si kastaba ha ahaatee waxaa uu ahaa sharci korsan oo fahamsan sida waddamada ay xuquuqda shaqaalahooda u ilaashadaan, gaar ahaan kuwooda ka shaqeeya dalal shisheeye.
Previous article[Akhriso] Safiirada Midowga Yurub & Ingiriiska oo Villa Somalia ku eedeeyay dilka Xil. Aamino
Next articleCabdirisaaq Cumar Maxamed oo markale ku guuleystay Kursiga Golaha Shacabka
Shirkii wadatashiga arimaha doorashooyinka oo markale dib u dhacay